पहिरन मात्र होइन, अनुहार पनि दुरुस्तै, उचाइ, रूपरंग एउटै भएका तिम्ल्याहा एसएलसी परीक्षार्थी (२०६८ चैत्र १७, बुधवार)
- जानु पंगेनी
स्याङ्जा - पहिरन मात्र होइन, अनुहार पनि दुरुस्तै । उचाइ, रूपरंग एउटै भएका तिम्ल्याहा परीक्षार्थी देख्दा यहाँको कोल्मा बराहचौर उच्च मावि केन्द्रमा अरू परीक्षार्थी मात्र होइन, निरीक्षक पनि झुक्किन्छन् । 'अहो कस्तो तीनैजना एउटै, कुन को हो ? छुट्याउनै नसकिने ?,' देख्नेहरू छक्क पर्दै आश्चर्य मान्छन् । ओरस्टे-२, सेराका १५ वर्षीय संगम पोख्रेल, सन्दीप र सरगम यतिखेर सबैको आर्कषणका पात्र बनेका छन् । उनीहरू स्थानीय दिव्यप्रकाश उच्च माविका प्राचार्य टुकनारायण पोख्रेलका तिम्ल्याहा सन्तान हुन् । पहिलो सन्तान छोरी पाएकी उनकी आमा तेजमायाले दोस्रोपटक तिम्ल्याहा जन्माएकी थिइन् । आमा तेजमाया पनि स्थानीय नवज्योति प्राविमा शिक्षिका हुन् । दिव्यप्रकाश उच्च माविका उनीहरूको प्रवेशिका केन्द्र कोल्मा बराहचौर उच्च माविमा परेको हो । उनीहरू रूपरंगले मात्र उस्तै होइनन्, पढाइमा पनि उस्तै उस्तै छन् । एसएलसी टेस्टमा संगम दोस्रो, सन्दीप तेस्रो र सरगम चौथो भएका थिए । सुरुदेखि नै प्रायः यही स्थान आउने गर्छन् । 'कहिलेकाहीं तेस्रो, चौथो र पाँचौंसमेत भएका छौं,' संगमले भने, 'तर हाम्रो स्थान जहिले पनि लगातार हुने गर्छ ।' तीनमध्ये जेठा संगम र माइला सरगमको कमर्स पढ्ने इच्छा छ । कान्छा सन्दीपको राम्राे अंक आएमा इन्जिनियरिङ पढ्ने धोको छ । तर उनले दुई दाजुसँग छुट्टनिुपर्ने पिरले निर्णय लिन सकेका छैनन् । उनीहरूको सिम्बोल नम्बर लगातार पर्ने हुँदा परीक्षामा पनि सँगै परेका छन् । तीनैजना निकै अनुशासित भएको केन्द्राध्यक्ष बलराम दोरङगाले बताए । 'एकापसरमा सिकाउने गरेको देखिएकै छैन,' उनले भने । उनीहरू स्कुलमा, घरमा जतिबेला पनि सँगै हुन्छन् । 'यिनीहरू बेस्सरी झगडा गरेको अहिलेसम्म्ा थाहा छैन,' आमा तेजमायाले भनिन्, 'कपडा किन्दा पनि उस्तै कपडा रोज्छन् ।' तिम्ल्याहा जन्मेदेखि उनीहरू सबैको आकर्षणका पात्र बनेको परिवारजन बताउँछन् । 'तिम्ल्याहा भएकामा छिमेकी पनि हेर्न आउँछन्,' बुबा टुकनारायण पोख्रेलले भने, 'सबैले उनीहरूलाई रुचिका साथ हेरेको देख्दा गर्व महसुस हुन्छ, सबै अचम्म पर्छन् ।'
Rajesh Raya २०६८ चैत्र १७, बुधवार यो त अचम्मै भयो तर सुन्दा धेरै राम्रो पनि लाग्यो। यो एउटा कारीश्मा Damodar २०६८ चैत्र १७, बुधवार Yo ta achhama lagdo sahiri jastai chha la malai dherai ramro lagyo. Nimandna Acharya २०६८ चैत्र १७, बुधवार we need his picture प्रतिक्रिया दिनुहोस्
माओवादी सभासद् एसएलसीको नतिजामा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण एसएलसी नतिजामा गत वर्ष भन्दा ९%ले घटे, अनुत्तीर्ण विद्यार्थीका लागि साउन २३-३० गतेसम्म पुरक परीक्षा ( सन् २०१२ बाट कक्षा १२ मा एसएलसीको अन्तिम परीक्षा लिइने) एसएलसीको परीक्षाफल सार्वजनिक, ५५.५ प्रतिशत उत्तीर्ण पिटिएर छ शिक्षक बिस्थापित भई पुनस्थापना भएको एक महिना बित्न नपाउँदै अन्य तीन शिक्षकमाथि माओवादी आक्रमण सरसफाई सप्ताह सुरु नवलपरासीमा सर्पको टोकाईबाट १९ वर्षीय एक युवकको मृत् सेतो गुराँसको साधारण सभा उदयपुरमा जंगल शिकर खेल्न गएका एक शिकारीको आफैले बोकेको बन्दु पडकिएर मृत्यु प्रसूति गराउन आएकी २५ वर्र्षीया महिलाको रौतहटमा मृत्यु सात महिनाकी गर्भवती श्रीमतीलाई बन्चरो हानी घाइते आफ्नै पतिको पन्यु प्रहार गरी हत्या वैवाहिक सम्बन्धमा विवाद हुँदा रुकुम विजयश्वरी गाउँका पाँचजना घाइते क्षत्री समितिले गरेको बन्दको कारण जनजीवन प्रभावित भक्तपुर - ललितपुरमा बसको ठक्करबाट दुई जनाको मृत्यु आज देखि राष्ट्रिय जनगणना २०६८ सुरु प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि लोकसेवा आयोगको सामान्य प्रशासन समूहको परीक्षा स्थगित झापाको दुवागढीमा एक १४ वर्षीय किशोरको भुँडीमा गोली हानी हत्या झापाको दुवागढीमा एक १४ वर्षीय किशोरको भुँडीमा गोली हानी हत्या बारामा उच्च माध्यमिकद्वारा सञ्चालित कक्षा १२ को परिक्षामा ३६ जनाको परिक्षा रद्द टीकापुरका मोबाइल व्यापारीहरुले चोरी रोक्न टीकापुर बजार बन्द « previous12...19202122232425...3536next »
अहिलेसम्म ६७१३७३२६ पटक भिजिट गरियेको छ । प्राविधिक सहयोगी संस्था - बेष्ट नेपाल प्रा. लि.